AfricArXiv iyo bahwadaagta COS si ay u taageeraan cilmi baarista Afrika-AfricanArXiv
Published by AfrikArXiv on 22nd Oktoobar 2020 22nd Oktoobar 2020
qorayaal: Nicole Pfeiffer, Claire Riss, iyo kooxda AfricanArXiv
Bishii Juun 2018, Xarunta Sayniska Furan (COS) iyo madal Furan oo isugu jirta edbinta iyo anshax marinta Open Open AfrikArXiv bilaabay a iskaashi si loo siiyo adeeg horudhac ah bulshada aqoonyahanada Afrika. Hadda, hoggaanka COS iyo AfricArXiv waxay raadinayaan inay si wadajir ah u hormariyaan deeqda waxbarasho iyada oo loo marayo isdhaafsiga furan ee fikradaha iyo caddeynta, adduunka oo dhan si firfircoon loogu daro bulshada aqoonyahannada Afrikaanka ah.
Inta badan is-weydaarsigan hadda wuxuu ku dhacaa iyada oo loo marayo daabacaadda maqaallada joornaalka ka dib dib-u-eegista asxaabta, taas oo ku dareysa bilo ama xitaa sannado faafinta natiijooyinka. Iyadoo la wadaagayo qoraallada ka hor dib-u-eegista rasmiga ah ee asxaabta, geeddi-socodka iyo isgaarsiinta natiijooyinka waa la dedejiyay oo laga dhigay mid la wada gaari karo. Joornaallo badan ayaa qaata khidmadda rukunka si ay u helaan qoraalada la daabacay, hase yeeshe iyaga oo la wadaagaya qoraallada ka hor iyo dhajinta daabacaadda bilaashka ah ee cilmi-baaraha, helitaanka furan ee dhammaan aqoonyahannada ayaa lagu guuleystay.
Marka laga soo tago daabacaadda furan ee la heli karo ee deeqda waxbarasho iyada oo loo marayo horudhac, COS iyo AfricArXiv waxay isku dayayaan inay dhiirrigeliyaan qaadashada dhaqannada cilmi-baarista ee furan, adag, iyo kuwa la tarmi karo. Wadashaqeyntan, bulshada cilmi baarista Afrika ee ka socota qaaradda oo dhan waxay ka qeyb geli karaan munaasabado tababar iyo mashaariic iskaashi iyadoo la adeegsanayo dhammaan astaamaha OSF waxay bixisaa, oo ka kasbataa aqoon ku saabsan dhaqannada ugu fiican, siyaasadaha, iyo dhiirrigelinta dhiirigelinta iyo kordhinta dhaqamada furan ee aqoonyahannada ee guud ahaan Afrika.
Horaantii bishan, AfricArXiv ayaa soo koobay guulaha iyo Roadmap-ka ilaa 1-3 sano ee soo socota. Waad ku taageeri kartaa kuna dhisi kartaa dhinaceeda adoo adeegsanaya furancollective.com/africarxiv.
Ujeedada wadashaqeynta sii socota waa in la helo adeeg kaabayaal dijitaal ah aqoonyahanada Afrikaanka, maktabadaha iyo Tacliinta sare ee kale (HE) iyo Cilmi baarista & Innovation (R&I) daneeyayaasha si loo sameeyo shaqooyinka cilmi baarista waqti dheeri ah iyo kharash hufan isla markaana la siiyo tababaro, aqoon isweydaarsiyo, iyo aqoon isweydaarsiyo ku saabsan Sayniska Furan iyo sidoo kale Maareynta Macluumaadka Cilmi baarista (RDM) iyo dukumiintiyada cilmi baarista.
In la raacayo khariidada wadada ee loo yaqaan 'AfricArXiv', COS iyo AfricArXiv labaduba waxay isku raaceen:
Horumarinta faylalka shuraakada iyo aasaasida adeegyo wadaag ah oo lagu horumariyo laguna habeeyo daneeyayaasha cilmi baarista Afrika iyo Tacliinta Sare.
La socodsiinta daneeyayaasha Afrika ee HE si ay uga warbixiyaan adeegyada COS iyo AfricArXiv iyo sida kuwani uga faa'iideysan karaan qulqulka shaqo ee aqoonyahannada Afrika iyo sidoo kale soo helitaanka shaqadooda
La shaqeynta ururada cilmi baarista Afrika iyo ururada shuraakada la ah si loo aqoonsado duleellada ku jira dukumiintiyada shaqada socodka cilmi baarista iyo soo jeedinta fursadaha OSF si loo buuxiyo meelaha banaan
Qoraalka soo jeedinta wada shaqeynta iyo lacag ururinta khadka tooska ah si loo hubiyo joogtaynta maaliyadeed ee dadaalka wadajirka ah
Abaabulaan tababaro wadajirka ah iyo aqoon isweydaarsiyo ku saabsan Helitaanka Furan iyo Hufnaanta Cilmi-baarista iyada oo loo marayo ku-dhaqanka Sayniska Furan
Waa ku mahadsan tahay bilowgii bilowga ahaa ee COS inaan u adeegno aqoonyahanno Afrikaan ah waxaanan ku faraxsanahay sii wadida iskaashigeenna ka shaqeynaya fursadaha iyo guulaha ka soo bixi doona tan,
ayuu yiri kooxda AfricArXiv.
Iskaashi lala yeesho bulshada AfricArXiv si loo taageero aqoonyahannada Afrikaanka ah ee ka kala socda qaaradda oo dhan hab-dhaqanno cilmi-baaris adag oo hufan ayaa awood u siinaysa wadaagga aqoonta la dedejiyay. COS waxay rajeyneysaa inay lashaqeyso dhisida awooda iyo kobcinta qaadashada dhaqamada sayniska furan ee kooxda AfricArXiv,
ayuu yiri Agaasimaha COS ee badeecada Nici Pfeiffer.
Iyada oo loo marayo iskaashiyo sida kan lagu aasaasay COS, waxaan rajeyneynaa inaan dhisno bakhaar cilmi baaris madax-bannaan, hufan, waara oo baahsan oo u adeegta sidii barxad is-dhexgal ah oo loogu talagalay tabarucayaasha cilmi-baarayaasha Afrika, iyo dhammaan saynisyahannada ka shaqeeya duruufaha Afrika, iyadoo ujeedadu tahay kordhinta helitaanka cilmi baarista Afrika.
ayuu yiri Maamulaha Jaaliyada AfricArXiv, Johanssen Obanda
Ku saabsan Xarunta Sayniska Furan
Isweydaarsiga fikradaha furan waxay dardar galineysaa horumarka cilmiyaysan ee lagu xallinayo dhibaatooyinka joogtada ah ee aadanaha. Caqabadaha jirada, saboolnimada, waxbarashada, caddaaladda bulshada, iyo bay'adda ayaa ah kuwo aad u deg deg ah oo lagu xallin karo in waqti lagu lumiyo daraasadaha aan lahayn qallafsanaan, natiijooyinka aan waligood la wadaagin, iyo natiijooyinka aan dib loo soo celin karin. COS waxay taageertaa cilmi-baarista adduunka iyadoo la siinayo qalab iyo tababar, iyo isku-dubaridka isbeddelka dhaqanka ee xeerarka, dhiirrigelinta, iyo siyaasadaha guud ahaan bulshada cilmi-baarista si cilmi-baaristu u sii socoto, ka dhakhso badan, oo ka sii wanaagsan.
AfricArXiv waa keyd dijitaal ah oo bulshada ay hogaamiso oo loogu talagalay isgaarsiinta cilmi baarista Afrika iyo hab furan oo la heli karo oo lagu wadaago tabarucaadka cilmi baarista ee dhinacyada kala duwan. Waxaan ku siineynaa barxad aan faa'iido doon ahayn oo lagu soo rogo waraaqaha shaqada, horudhacyada, qoraallada la aqbalay (daabacaadda kadib), bandhigyada, iyo qaababka xogta iyada oo loo marayo barnaamijyada lamaanahayaga. AfricArXiv waxay u heellan tahay kobcinta cilmi-baarista iyo iskaashiga saynisyahannada Afrika, kor u qaadista aragtida wax soo saarka cilmi baarista Afrika iyo in la kordhiyo iskaashiga adduunka.
Ku saabsan Qaab dhismeedka Sayniska Furan
AfricArXiv waxaa lagu martigaliyay isha furan ee Qaab-dhismeedka Sayniska (OSF) oo ay weheliso adeegyo kale oo horudhac ah (eeg https://osf.io/preprints/). OSF waxay ka caawisaa cilmi baareyaasha inay qaabeeyaan, la shaqeeyaan, oo ay maareeyaan hawlahooda cilmi baarista, xogtooda iyo keydintooda qalabka, waxayna siisaa aqoonsi joogto ah, gaar ahaan DOI (Aqoonsiga Ujeedada Dijital ah). OSF waxay bixisaa meel ammaan ah oo aad u badan, kaydinta hawsha
adeegyo kalsooni leh si loo ilaaliyo wax soo saarka cilmi baarista. COS waxay ka faa'iideysatay barxada si ay uga caawiso cilmi baarista jaaliyado badan iyo dalal inay ogaadaan cilmi baaris cusub ayna helaan jawaab celin ku saabsan wax soo saarkooda ka hor daabacaadda taas oo hagaajinaysa qalafsanaanta. Qorayaasha diyaarinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku daraan xiriiriyeyaasha aaladooda cilmi baarista, xogta, koodhka iyo diiwaangelinta ka hor si loo kordhiyo daahfurnaanta iyo kalsoonida.
Ku shaqeynta adeegyo badan oo ku saabsan kaabayaasha la wadaago waa kharash aad u sarreeya. Kharashka ku baxa socodsiinta hal adeeg oo hor-u-madaxbanaan ayaa bulshooyin badan ka hor istaagi kara. Iyada oo kaabayaasha guud la wadaago, adeegyada horay loo sii qoondeeyay ayaa wadaagaya wadarta kharashyada hoos u dhigaya mas'uuliyadda qofka iyo kor u qaadista joogtaynta
Waxaad si toos ah uga taageeri kartaa adeegyada horay loo sii qorsheeyay ee AfricArXiv https://opencollective.com/africarxiv
La xiriir Xarunta Sayniska Furan iyo OSF
Waxweydiinta: Claire Riss claire@cos.io
La xiriir AfricArXiv
Waxweydiinta: Johanssen Obanda info@africarxiv.org
Categories:	Capacity BuildingiskaashiFuran FuranSayniska FuranOgeysiis iskaashi ahDiyaargarowIsgaarsiinta Sayniska